Posted by ကို Tranquillus | ဇွန်လ 20, 2018 | တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပြင်သစ်တွင်အလုပ်မလုပ်
တိုင်းပြည်သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ရွှေ့ဖို့, ပြင်သစ်ဝင်စေရန်, သင်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အပါအဝင်တိုတောင်းသို့မဟုတ်တော့ဘူးအချို့သောခြေလှမ်းများ, ဖြည့်ဆည်းရပါမည်။ ဥရောပနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားများအတွက်အဆင့်အလွန်အလင်းဖြစ်ကြ၏။ နေအိမ်သို့ပါမစ်ရယူဘို့လုပျထုံးလုပျနညျးလုပျအဖြစ် entry လိုအပ်ချက်များကိုထို့နောက်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
ပြင်သစ်တွင် entry လိုအပ်ချက်များကို
နိုင်ငံခြားသားများပြင်သစ်တွင်ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လကြာဝင်နိုင်ပါတယ်။ entry လိုအပ်ချက်များကိုထို့နောက်မူရင်းသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်, သူတို့၏အရင်းခံသည်နှင့်အညီခြားနားသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သူတို့ entry ကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။ ဒီနေရာတွင်ပြင်သစ်တွင်အားလပ်ရက်အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါတယ်။
အီးယူနိုင်ငံသားများသုံးလကာလအဘို့ရိုက်ထည့်ပါနှင့်ပြင်သစ်တွင်လွတ်လပ်စွာရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာဖြစ်သို့မဟုတ်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များကလိုက်ပါသွားလို့မရပါဘူး။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း, အလုပ်အကိုင်, သင်တန်းပေးခြင်း, etc: သုံးလ၏အများဆုံးကာလအဘို့ဤနေထိုင်အများအပြားအကြောင်းရင်းများဖြစ်နိုင်သည်
ထက် ပို. သုံးလပဲကျန်ရှိနေ
ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာသို့မဟုတ်မလှုပ်မရှားဆွစ်ဇာလန်၏ဥရောပအဖွဲ့ဝင်လွတ်လပ်စွာပြင်သစ်တွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်သစ်တွင်ပိုမိုထက်ငါးနှစ်ကာလများအတွက်ဥပဒေနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်နေထိုင်ပြီးနောက်, သူတို့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဆည်းပူး။
ပြင်သစ်တွင်တစ်နေဘို့, နိုင်ငံခြားနေထိုင်သူများခိုင်လုံသောဝိသေသလက္ခဏာစာရွက်စာတမ်းနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံရှိရမယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်တိုင်းပြည်များ၏လူမှုရေးအကူအညီများ system ပေါ်တွင်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်ရန်လုံလောက်သောအရင်းအမြစ်များကိုရှိရမည်။
ထိုမှတပါး, အီးယူနိုင်ငံသားများအလုပ်လုပ်နှင့်ပြင်သစ်အတွက်အသက်ရှင်ရန်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်လှုပ်ရှားမှု Non-န်ထမ်း (အများပြည်သူအလုပ်အကိုင်အညီ) သို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါနေအိမ်သို့ပါမစ်သို့မဟုတ်အလုပ်မဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူး။ ပြင်သစ်တွင်ငါးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကလည်းအမြဲတမ်းနေထိုင်တစ်ဦးလက်ျာဘက်ရ။
ပြင်သစ်များအတွက်ဗီဇာရရှိရန်မိမိတိုင်းပြည်၏ပြင်သစ်သံရုံး၏ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့မဟုတ်ဗီဇာဌာနကိုဆက်သွယ်ရပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုအရ, ကရက်ချိန်းရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများအများကြီးအဘို့, ဗီဇာပြင်သစ်ရိုက်ထည့်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ တချို့ကသို့ရာတွင်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ, ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်၏သူတို့အားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
ပြင်သစ်များအတွက်ဗီဇာရရှိရန်, တနေအဘို့အကြာချိန်နှင့်အကြောင်းပြချက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ရပါမည်။ တိုတိုပဲကျန်ရှိနေများအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလ 906ရက်ပေါင်းတဲ့ကာလပါဝငျသညျ။ ထို့ကြောင့်သူတို့ခရီးသွားလုပ်ငန်း, စီးပွားရေးခရီးစဉ်, လာရောက်လည်ပတ်သူ, သင်တန်း, အလုပ်သင်နှင့် paid အလုပ် (ကအလုပ်ပါမစ်ရယူအကြံပြုခြင်း) ကိုတောင်းခံလေ့ရှိသည်။ ရှည်လျားသောထို့ကြောင့်ကာလစိုးရိမ်ပူပန်လေ့လာမှု, အလုပ်, ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ...
တစ်ဦးကခိုင်လုံသော ID ကို;
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (အရင်းမြစ်များ) ။
တစ်ဦးကပုံစံမေတ္တာရပ်ခံဗီဇာအမျိုးအစားကိုမှအညီပြည့်စုံလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများမူရင်းနှင့်မိတ္တူဟုအမည်ပေးထားသည့်ဖြစ်ရပါမည်။ ဤရွေ့ကားပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပေးရန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သောသံရုံးနှင့်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးဖြစ်ကြသည်။ သတ်မှတ်ရက်တယောက်ကိုတယောက်တိုင်းပြည်ကနေကိုအလွန်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသို့သော်ဗီဇာကိစ္စကိုသည့် နေ့မှစ. သုံးလကာလသည်သက်တမ်းကျန်ရှိနေဆဲကိုသတိထားပါဖြစ်ရပါမည်။ တရားဝင်အညီဆောင်ရွက်ရပါမည်။ အဆိုပါဗီဇာနိုင်ငံသားများ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အပေါ်တိုက်ရိုက်တံဆိပ်ထုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ဘို့ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် applications များမြို့ခန်းမထဲမှာထားကြပါတယ်။ ပြည်ပမှာပြင်သစ်နိုင်ငံသားများဒါကြောင့်သူတို့တည်ရှိသည်ရှိရာနိုင်ငံတွင်သံရုံးများနှင့်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးအတွက်တောင်းဆိုရန်။ ပိုင်ရှင်၏ရှေ့မှောက်တွင်စာရွက်စာတမ်းများအတွက် fingerprinting ဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူလိုသူများသည်မိတ္တူကူးထားသောမိတ္တူနှင့်အတူတရားဝင်အထောက်အထားကိုတင်ပြရမည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပမာဏသည် ၉၆ မှ ၉၉ ကြားကြားရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများသည်လိပ်စာအထောက်အထားပြရမည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူရန်နှောင့်နှေးခြင်းသည်တောင်းဆိုမှု၏နေရာနှင့်အချိန်ပေါ်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုအချိန်မီရရန်သေချာစေရန်ဤနေထိုင်မှုမတိုင်မီလအနည်းငယ်အကြာတွင်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည် ၁၀ နှစ်သက်တမ်းရှိသည်။ ဤကာလ၏အဆုံးတွင်, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။
ဖတ်ရန် ကျွမ်းကျင်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်။ အလုပ်ရှင်၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှု။
အဆိုပါဥရောပတိုက်သားများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့နှင့်လူမှုရေးအကူအညီများ system ပေါ်တွင်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ခြင်းမအခြေအနေပေါ်, ပြင်သစ်အခြေချနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောပြင်သစ်တွင်အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ် Self-အလုပ်အကိုင်အဖြစ်ဝင်ငွေတစ်ဦးလုံလောက်သောအရင်းအမြစ်ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ ငါးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကအမြဲတမ်းနေထိုင်၏ညာဘက်ရ။ နိုင်ငံခြားရေးနိုင်ငံသားများအသက်ရှင်ရန်ဗီဇာရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပြင်သစ်တွင်ယာယီအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသံရုံးသို့မဟုတ်မူရင်း၎င်းတို့၏တိုင်းပြည်တွင်တည်ရှိသောပြင်သစ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ပြင်သစ်တွင် entry ကိုနှင့်ဗီဇာနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏အခွအေန သြဂုတ်လ 23rd, 2018Tranquillus
အသားတင်လစာနှင့် စုစုပေါင်းလစာ ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။